Homeसमाचारजाडोमा खानुस् कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा
November 23, 2020 admin समाचार 8778
कोदोको रोटी तथा ढिँडो नखाने नेपाली कम नै होलान् । चिसो मौसममा तातो र मिठो परि’कार खाने चलन धेरैको हुन्छ । तातो र मिठो खानाको विष’यमा चर्चा हुँदा जाडो’याममा कोदोको ढिँडो पहिलो रोजाइ हुन थालेको छ ।
पहिला पहिला–गाउँघरमा चामल उत्पा’दन कम हुने भएकाले कोदोको ढिँडो बढी खाने गरिन्थ्यो । त्यसैले पनि चामलको भातलाई कुनै विशेष चाड’पर्वमा खानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको थियो ।
तर, अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ । गाउ शहरमा चामल भन्दा ढिँडो लोकप्रिय बन्न थालेको छ । परिवारका सबै सदस्य भेट हुँदा घरमा मिठो परिकार बनाउने भनेर चिसोमा ढिडो खाने चलन समेत आएको छ ।
शहरी क्षेत्रका ठूला ठूला होटलमा विशेष परिका’रको रुपमा ढिडो पाक्न थालेको छ । चिसो मौसम शुरु भएसँगै मानिसहरु कोदोको ढिडोतर्फ लोभि’ने गरेका छन् ।
चिसो मौसममा रमाइलो मान्दै ढिडो खादा पारिवारिक खुसी मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायीक मानिन्छ । कोदोको ढिडो मात्र होइन रोटी र अन्य विभिन्न परिकार समेत बनाएर खाइन्छ ।
कोदो ढिँडो तथा परिकारको फाइदा
कोदो स्वास्थ्यका लागि अत्य’न्त फाइदाजनक हुन्छ । कोदोका परिकार प’चाउन सहज हुन्छ । कोटोमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्यागनिज, भिटामिन बी, टिप्टोफेन, फाइबर, एन्टिअक्सि’डेन्टलगायतका पोष’क तत्त्व पाइन्छ । कोदोका परि’कार शक्ति र ऊर्जाका लागि राम्रो श्रोत हो ।
तौल घटा’उन कोदो खानु राम्रो मानिन्छ । कोदो खाएको धेरै समयसम्म भोक लाग्दैन । जसले गर्दा तौल नियन्त्र’णमा सघाउ पुग्छ । मुटुका रोगीहरूका लागि कोदोको रोटी खानु धेरै लाभदा’यक हुन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा नियासिन हुन्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाएर मुटु रोगको जो’खिम पनि कम गर्छ ।
यसबाहेक यसमा भएको पोटेसियम र म्याग्नेसियमले रक्तचाप नि’यन्त्रण राख्न सघाउँछ । कोदामा प्रशस्त मात्रामा भएको क्याल्सियमले हाड बलियो बनाउन सह’योग पुर्‍याउँछ । कोदोमा हुने आइ’रनले रक्त अल्पता हुन दिदैन ।
यस्तै कब्जियत र ग्यासको स’मस्या भएकाहरूले नियमित रुपमा कोदोको रोटी वा ढिडो खाने गरे आ’राम पाइन्छ । मधुमेहको खतराबाट बच्न कोदोको परिकार ला’भदायीक छ । -खबरहब बाट
विजु पार्की र रेश्मा घिमिरेको विबाह ! देखियो यस्तो रमाइलो माहोल(भिडियो हेर्नुहोस्)
March 17, 2021 admin समाचार 4992
पशुपति क्षेत्रमा बत्ती नि’भाएर विरोध गरिने
October 4, 2020 admin समाचार 11804
पशुपति क्षेत्रमा आइ’तबार र सो’मबार साँझ ७:०० बजेदेखि ७:३० बजे’सम्म बत्ती निभाउने (ब्ल्याक आउट) कार्य’क्रमको घोषणा गरिएको छ। पशु’पति क्षेत्र संयुक्त सङ्घ’र्ष समितिको आयो’जनामा हालै प्रस्ताव गरिएको गुरुयो’जनाको विरोधमा सो कार्यक्रम आयो’जना गरिएको बता’इएको छ।
गायक कुशलले खोले बिष्णु माझी १० बर्षसम्म मिडियामा नदे’खिनुको कारण यस्तो रहेछ(भिडियो सहित)
February 7, 2021 admin समाचार 6224
चर्चित लोक गायिका विष्णु माझि र उनको खु’ल्न नसेकेका जिन्दगीका पानाहरुको खोजी धेरै पहिलादेखि नै भई रहेको छ । सुरिलो स्वरकी धनी विष्णु माझिको एक झल्को पाउन वि’गतदेखि वर्तमानसम्मै उनका दर्शकहरु आतुर छन् । विष्णु
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241917)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228440)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227393)